Go'aanso Horeba: Qabsashada iyo Jawaab celinta Darajada | Martech Zone
Talaado, Febraayo 11, 2014 Douglas Karr
Waxaan jecel nahay qalabka ka soo qaada macluumaadka macaamiisha, laakiin runtii ma jiraan wax hal-ku-habboon oo xal ah. Mararka qaarkood waxaad ubaahantahay ikhtiyaarro kala duwan oo su'aalo ah, mararka qaarkoodna su'aal firfircoon iyo jawaab, waqtiyo kale waxaad ubaahantahay shaqsiyeyn. Waxaa la i weydiistey inaan Garsoore ka noqdo Indianapolis ' Abaalmarinta TechPoint Mira loogu talagalay 2014 iyo Joshua Hall waxay u adeegsanayaan aaladda garsoorayaasha inay ku soo qabtaan macluumaadka kuna codeeyaan qof kasta oo la soo xusho. Waa qalab weyn oo ah wax soo saar kale oo hal-abuurnimo ah qaboojiyeyaasha SproutBox.
Sidee Go'aan u Gaadho Horeba
Goor Hore way ka yara duwan tahay inta kale… waa qalab deg deg ah (imikana bilaash ah) oo kuu ogolaanaya inaad ku qaybiso su'aal aad ku codeyso ama aad ku darajooto oo aad jawaabo ku hesho si deg deg ah oo aan dhib lahayn.
Waa kuwan 5 Sababood oo Loogu Saxeexdo Go'aan Horeba:
Waa Bilaash! Isticmaalka Go'aan Horeba si aad go'aan u gaarto waa bilaash. Qaababkayaga go'aan qaadashada ee Sahlan iyo Darajo ah had iyo jeer waa bilaash. Xitaa habkayaga sare ee go'aan qaadashada, oo ay kujirto Mashiinka Go'aanka DecideAlready waa bilaash waqti xadidan.
Dhammee Emailka xanaaqa 'Reply-Alls' - Markaad weydiiso koox dad ah fikradahooda iimaylka, waxaad badiyaa dhalisaa jawaabo u muuqda kuwo aan dhammaad lahayn. Inta badan kaqeybgalayaashaadu waxay aad u xiiseeyaan inay yeeshaan ra'yigooda intii ay maqli lahaayeen kuwa kale.
Go'aannada Ka Soo Degdeg Go'aannada qaarkood waxay u baahan yihiin in dhakhso loo gaadho. Go'aan Horeba u codso jawaab celin isla markiiba oo xisaabiso natiijooyinka socda. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad xadiddo waqtiga jawaabaha. Mashiinka Go'aanka Go'aanka Horeba wuxuu xitaa u xisaabin karaa natiijooyinkaaga si otomaatig ah wuxuuna u diri karaa go'aanka ugu dambeeya kaqeybgalayaashaada.
Dhis Kalsoonida. Dhis heshiis - Markaad go'aan gareyso adoo isticmaalaya DecideAlready, kaqeybgalayaashaada oo dhami waxay ogaan doonaan in codkooda la maqlay. Waxay sidoo kale ogaan doonaan in taladooda loo tixgeliyey si cadaalad ah, iyo in go'aan lagu gaarey xirfad ahaan.
Mashiinka Go'aanka - Waa Awood iyo Waa Madadaalo! Mashiinka Go'aanka Go'aanka Horeba wuxuu kaa caawinayaa inaad xitaa si fudud u gaarto go'aannada ugu adag. Kaqeybgalayaashaada ayaa qiimeyn kara mid kasta oo jawaabahaaga ah iyadoo lagu saleynayo dhowr shuruudood. Markay codbixintu xirmeyso, waad hagaajin kartaa muhiimada sharuudo kasta. Mashiinka Go'aanku wuxuu saadaalinayaa saameynta ficiladaadu ku yeelan doonto go'aanka ugu dambeeya isla markiiba!
Tags: go'aan horebago'aankago'aannadadoorashadasanduuqasahan